Ubuciko beBongo Ukuvakasha kobuchopho bomuntu | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Ama-Brain Basics
Uma kuphela sizalelwa ngencwadi yokufundisa ngalokho okusikhathaza! Izindaba ezinhle ukuthi, akukaze kube yisikhathi sokufunda. Kuyinto eyinkimbinkimbi, kodwa njengemoto, akudingeki sikwazi konke mayelana nenjini ukufunda ukuyiqhuba ngokuphepha.
Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi azifani nezithombe ezingcolile ze-past. Ithinta ubuchopho ngendlela egcwele kakhulu. Amavidiyo amabili okuqala achaza indlela. Benza iphutha ngaphandle kwenkinga ngokuchaza ukuthi ubuchopho bungakanani, ikakhulukazi ubuchopho bentsha, bubheke ekuzijabuliseni okugqugquzelayo okuhambisana nendawo yethu kanye namasiko.
Le nkulumo ye-TED yamaminithi we-4 okuthiwa "I-Demise of Guys"Nguprofesa waseStanford uFiliphu Zimbardo ubheka umlutha wokuvutha.
"Isivivinyo Esikhulu Sokuzijabulisa”Iyinkulumo ye-TEDx yemizuzu engu-16 eyenziwe nguthisha owayenguthisha wesayensi uGary Wilson, ephendula inselelo ebekwe nguZimbardo. Kubukwe izikhathi ezingaphezu kwezigidi eziyi-11.7 ku-YouTube futhi ihunyushelwe ezilimini eziyi-18.
UGary uvuselele inkulumo ye-TEDx kwisethulo eside (1 hr 10 amaminithi) okuthiwa "Ubuchopho bakho ku-Porn- Yeka ukuthi i-Internet Iyithinta Ubuni Bakho“. Kulabo abakhetha incwadi ehehayo futhi efundisayo bona ekaGary Ubuchopho bakho ku-Porn: Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi eVukayo yokuMlutha itholakala nge-paperback, ngomsindo noma ku-Kindle. Uhlelo lwakamuva lufaka isigaba esigabeni esisha esibuyekeziwe se-World Health Organisation Classification of Diseases (ICD-11) esihlinzeka ngokutholakala okusha kwe-'Compulsive Sexual Behavior Disorder 'okokuqala ngqa.
Uyini umehluko phakathi kobumnandi nenjabulo futhi kungani kubalulekile? Buka le vidiyo enhle ebizwa ngokuthi “Ukuqeda i-American Mind: i-Science ngemuva kokubambisana kwebhizinisi kwamalungu ethu nobuchopho”Ngesazi se-neuroendocrinologist uDkt Robert Lustig ukuthola ukuthi kungani. (32 imizuzu 42 amasekhondi)
Kulesi sigaba 'sezisekelo zobuchopho' iReward Foundation ikuthatha ikuvakashele ubuchopho bomuntu. Ingqondo iguqukile ukusisiza basinde futhi bathuthuke. Isisindo esingaba ngu-1.3kg (cishe ama-3lbs), ubuchopho bomuntu benza nje u-2% wesisindo somzimba, kepha usebenzisa amandla angaba ngu-20%.
Ukuze uqonde ukuthi ubuchopho buguquke kanjani ukusebenza ngokujwayelekile, bheka i ukuthuthukiswa kwemvelo kwengqondo. Ngokulandelayo sizobona ukuthi izingxenye zisebenza kanjani ngokubheka imigomo ye- i-neuroplasticity, yileyo ndlela esiyifunda ngayo nemikhuba engafundile kuhlanganise nokuthuthukisa umlutha. Sizophinde sibheke ukuthi ubuchopho bukhuluma kanjani ukukhanga, uthando nokulala ngocansi ama-neurochemicals. Ukuqonda ukuthi kungani siqhutshelwa kule miklomelo, kubalulekile ukwazi ngefayela le- uhlelo lokuvuza. Kungani i-golden age of adolescence inesiyaluyalu, imnandi futhi idideka? Thola kabanzi mayelana nalokhu ubuchopho obusha.